UngaJolisa njani iResume kumava eNgcono oMsebenzi
Gxila ekuqhubekeni kwakho kumava omsebenzi afanelekileyo kwisikhundla esithile ukuphucula amathuba akho okufumana loo msebenzi. Ukuba namava omsebenzi afanelekileyo kuhlala kuyinto enkulu ngokudibanisa emehlweni abaqeshi. Ukuba unemisebenzi emininzi kwimvelaphi yakho, unokuyilungisa i-resume yakho ukuqaqambisa izikhundla ezifanelekileyo zomsebenzi kwaye ushiye okanye ugxininise abanye.
Ukuqhubeka kwakhona okanye imbali yomsebenzi enokubonisa abanye ukuba awuzinikeli. Yisizathu hayi ukukuqesha. Gxila ekuqhubekeni kwakho ukuzobalela amava akho afanelekileyo omsebenzi.
Ukwahlula imisebenzi efanelekileyo kweminye imisebenzi
Xa i-resume yakho ijongeka ngokungathi izokuwa phantsi kobunzima be-mishmash yemisebenzi engaxhunywanga kwithagethi yakho yangoku, ungashenxisa izinto zakho zangaphambili ezingabalulekanga. Qokelela imisebenzi elandelwayo phantsi kwesihloko esithetha into enje Isishwankathelo esiFanelekileyo samava oMsebenzi okanye Imvakalelo yomsebenzi .
Ungathini ukuba le ndlela isombulula ingxaki enye-ukuqhubeka okuxakekileyo-kodwa kudala enye, enje ngomngxunya omkhulu omnyama omnyama apho ususe khona imisebenzi engabalulekanga? Yenza icandelo lesibini lomsebenzi wembali eligquma loo mingxunya, uyilebhelishe Amanye amava.
Yahlula amava akho omsebenzi afanelekileyo kwi-resume ukusuka kwamanye amava omsebenzi angahambelaniyo.
Ukwahlula imisebenzi yethutyana
Ukujongana nesimbo somsebenzi esingagxiliwanga ephepheni kulula xa kusenziwa phantsi kwesibhengezo senkampani yeenkonzo zethutyana. Nazi izikhokelo zolu hlobo lonyango:
Dwelisa inkampani yeenkonzo zethutyana njengomqeshi. Ukhetha isihloko esinye somsebenzi esigubungela uninzi lwezabelo zakho.
Chonga ii-asayinimenti ezithile phantsi kwesihloko esiphambili. Nika imihla kwiminyaka elandelayo kwinkampani yexeshana yeenkonzo, ukutsiba imihla yesabelo ngasinye (njengoko kubonisiwe ngezantsi).
Ukuphucula ukugxila ngokubeka ngokwamava amava omsebenzi phantsi kwesihloko esinye esikhulu.
Kuthekani ukuba usebenzela iinkonzo ezininzi zokwexeshana ngaxeshanye? Impendulo elula kukuba usebenzisa ubuchule obufanayo bokuthandana nembali yomsebenzi wakho kumashishini enkonzo yethutyana, hayi kwizabelo ezizodwa. Le ndlela yokuthandana yingxelo yenyani; ngokusemthethweni ungumqeshwa wenkampani yexeshana yeenkonzo, hayi inkampani ehlawulela iinkonzo zakho zethutyana.
Xa imisebenzi egqithileyo okanye ukugxila akuyongxaki, unokukhetha enye inkcazo-ntetho kuthotho lwemisebenzi yexesha elifutshane. Enye into ayikhankanyi iifemu (abasebenzi) kodwa kuphela ngamagama eenkampani osebenze kuzo.
Zithini iziphumo zecala lemethadone
travatan z iliso ukuhla
ndingathatha i-tylenol kunye ne-motrin kunye
Ipilisi ye-orange suboxone 54 375
i-clomiphene citrate yabasetyhini
yenza iakhawunti entsha ye-gmail